Ny traikefa mitambatra amin'ny kolotsaina, fanatanjahan-tena ary raharaham-barotra, fanoritana ny habaka ara-barotra ｜ UHG
Home / Interior design / Ny traikefa mitambatra amin'ny kolotsaina, fanatanjahan-tena ary raharaham-barotra, fanoritana ny habaka ara-barotra ｜ UHG
2021 / 06 / 23 FisokajianaInterior design 6149 0
Namolavola modely fiainana vaovao «kolotsaina, fomba ary orinasa» izy ireo.
Tsy mitovy amin'ny resaka fivarotana tsotra taloha, ny tetikasa amin'ity tranga ity dia orinasa iray vaovao.
Fanoritana ny habaka ara-barotra
Any amin'ny tanànan'i Wando, Haining, Faritanin'i Zhejiang, no misy azy io, tetik'asa tripartite tarihin'ny mpamorona trano sy ny Birao Fanabeazam-pirenena ary ny Birao Fanatanjahantena, mizara efatra rihana. Ny fototarazo voajanahary, izay mamaritra ny maodelim-barotra vaovao amin'ity raharaham-barotra ity, dia mampifangaro ny kolontsaina, ny orinasa ary ny fanatanjahan-tena amin'ny fiainana vaovao.
Manantena izahay fa ho afaka hampiseho ny endrika tsy manam-paharoa amin'ny fametrahana ny tetikasa amin'ny endrika manankarena sy sary an-tsaina, izay hamindra ny votoatin'ny tanàna ary hamorona ip azo fantarina hamorona orinasan-tanàna karatra
Ny fototry ny famolavolana habakabaka dia avy amin'io endriny ara-barotra vaovao io, izay fanehoana an'ity atiny ity koa. Nampiana koa ny lojika famolavolana anay. Amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny kolontsaina ara-panatanjahantena, ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zaza, ny asa ara-barotra ary ny serivisy ho an'ny daholobe, sns., Miaraka amin'ny endrika fananganana samihafa, ambaratonga 4 amin'ny endrika miasa samihafa no kasaina. Izy io dia efa nanomana mialoha ny atiny fandidiana ny habaka ho avy, sady manisy fiheverana ny fanintona ny orinasa ara-barotra.
Fambolena sary IP
Ho an'ny kalitaon'ity tetikasa ity dia mitady fusion foana ny volavolan-habakabaka, ny fihaonan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena, ny ray aman-dreny, ny orinasa, sns. Ny sary Ip dia soatoavinay fanampiny eo ambonin'ny famolavolana habakabaka. Amin'ny famoronana endrika kolontsaina sy fanahy marika, maneho ny mahavelom-bolo, ny fahafinaretana ary ny fifandraisan'ny habaka, indraindray milay. Ny sary Coolidge mahafinaritra sy mahafinaritra indraindray dia manidy avy hatrany ny elanelam-panahy eo anelanelan'ny habakabaka sy ny olona.
Ny fampiasana ny sary an-tsary dia lasa singa manan-danja amin'ny famolavolana habakabaka façade. Ny fanampiana ny sary IP dia mamono vorona roa amin'ny vato iray. Tsy manatsara ny fahitana ny teboka tsirairay fotsiny izy io, fa manamafy hatrany ny fiheveran'ny marika an'io habakabaka io.
365 foto-kevitra momba ny hetsika
Ny famoronana kianja fanaovana fanatanjahantena misy fampiasa maro ao anatin'ny toeram-pivarotana no nametraka ny hevitra lehibe voalohany momba ny habaka. Ny famolavolana dia manelanelana ny hevitry ny fanatanjahan-tena 365 eo an-tampon'ny, tany, ary ny haavo 4 an'ny marika fanatanjahan-tena ary mampifandray ny atiny isan'andro amin'ilay habaka.
Miaraka amin'ny habaka lehibe amin'ny rihana voalohany, mamela ny fisokafan'ity toerana ity hisokatra tsy misy fetra ity famolavolana ity. Amin'ny kolontsaina ara-panatanjahantena no tena fotony, ny hetsika samihafa toy ny lalao basikety, lalao baolina kitra, lalao ping pong, na fifaninanana famoronana zavakanto mivantana dia kasaina miaraka amin'izay ilain'ny lohahevitra samihafa. Raha fintinina, dia azo ampiasaina amin'ny faritra zato isan-karazany ary koa hahatsapa ny fifaninanana sy ny hetsika amin'ny mizana isan-karazany.
Ny famolavolana projet efijery 360 degre dia famolavolana drafitra habaka mamorona ary torolàlana marketing ho an'ny tanjona ara-barotra. Ny projet efijery 360 degre dia ahafahanao mijery ny zava-miseho mazava sy miaraka na aiza na aiza misy anao. Amin'ny fomba misoko mangina, izy io koa dia mameno ny fisarihana ny gorodona tsirairay ao amin'ny trano fivarotana.
Ny famolavolana ny atrium an'ny atrium dia mitazona ny canopy, izay manitatra ny fahatsapana ny habakabaka amin'ny sehatry ny varotra iray manontolo miaraka amin'ny jiro voajanahary sy ny fahitana. Ny endrika fametrahana ny firafitry ny kianja baolina dia mameno ny akon'ny tampon-tampon'ny sy ny velaran'ny tany.
Ny làlan'ny fanatanjahantena, marika ara-panatanjahantena, marika ara-panatanjahantena, gymnasium ary lohahevitra fanatanjahan-tena hafa dia noforonina ho toy ny traikefa lalina amin'ny rihana faha-4, ary amin'ny alina, miaraka amin'ny fanohanan'ny hazavana tarihin, ireo lohahevitra ara-panatanjahantena dia lasa fifantohana hita maso miaraka amin'ny fihenjanana ara-javakanto kokoa.
Ny fomba fanao mahazatra amin'ny maodely façade dia tapaka, ary ny fari-tany eo amin'ny fahitana roa-habe sy telo-habe amin'ny habaka dia tapaka ihany koa. Ny olona eny amin'ny habakabaka, mamorona fifandraisana an-tsary amin'ny lafiny maro. Ny fanehoana endrika mihetsiketsika marobe dia mahatonga ny habaka iray manontolo ho telo-refy kokoa ary ho sosona sy mahaliana kokoa.
Ny foto-kevitra momba ny fahafinaretan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka
Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny fanabeazana ary ny fampiofanana dia singa lehibe iray lehibe ao amin'ny orinasa vaovao. Volavola amin'ity fitenenana ity, ny fampiasana famoronana feno fahasahiana kokoa, hamoronana lalao vaovao tsy manam-paharoa ho an'ny ankizy.
Ny fahitana an'izao tontolo izao amin'ny mason'ny ankizy no loharanon'ny famoronana tsara indrindra hamoronana tontolo majika ho an'ny ankizy. Ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny fahafinaretana sy fikarohana, ary tetezana majika tsy manam-paharoa no miorina eo amin'ny haben'ny atrium, mihanika, mandalo, ary mandalo amin'ny fotoana sy habaka mifanila, ary mivadika ho kianja filalaovana tokana sy mahaliana.
Eo ambanin'ny fiheverana ny fiarovana, ny endriny dia amin'ny endrika fantsona toy ny net-translucent. Izany dia tsy mamaly fotsiny ny toetra filalaovan'ny ankizy, fa mampitombo ihany koa ny fahatsapana fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ary koa ny zanaka sy ny any ivelany.
Mifangaro ny fantsona harato. Izy io dia mamorona gadona tsy manam-paharoa an'ny atrium miaraka amin'ny loko isan-karazany, izay manazava ny fahatsiarovana sy ireo teboka mahafinaritra amin'ny habakabaka iray manontolo ary lasa toerana mahafinaritra.
Anaran'ny tetikasa: Haining Wando City
Toerana: 555 Haichang South Road, Henting City, Faritanin'i Zhejiang
Faritra tetikasa: manodidina ny 30000㎡
Agence famolavolana: Yuhe Guangnian
Mpanjifa: Vondrona Zhejiang Rhine Hongxiang
Mpamolavola lehibe: Zhang Yaotian
Ekipa mpamorona: Chen Yanzhou
Famolavolana lalina: Huang Yingwen
Famolavolana sary: ​​Luo Cong Yi
Fitaovana fialamboly: Foko harato amin'ny tady
Mpanoratra: Hu Lizhou, Qingge Media
Mpaka sary: ​​Wu Yue
Previous :: Fonenana an-tanàn-dehibe, fandikana ny fiatraikan'ny estetika atsinanana amin'ny fikorianan'ny borosy ｜ Donghe Yipin Next: Toerana firafitra tsotra, fampifangaroana ambony noho ny zavakanto | Ridge Design
2021 / 08 / 15 5436
2021 / 08 / 15 6013
2021 / 08 / 15 5775
2021 / 08 / 14 6012
2021 / 08 / 14 5195